Lukaku oo si dadban u weeraray saaxiibkiisii hore ee kooxda Manchester United – Gool FM
(Serie) 22 Agoosto 2019. Xiddiga reer Belgian iyo kooxda Inter Milan ee Romelu Lukaku ayaa ka hadlay wax walba ee ku saabsan sababtii uu kaga tagay kooxda Manchester United iyo u dhaqaaqistiisa Inter Milan.
Romelu Lukaku oo ku gudi jira wareysi gaar ah ayaa wuxuu si kaftan ah u weeraray saaxiibkiis horey kooxda Manchester United ee Anthony Martial wuxuuna yiri.
“Waxaan joogay magaalada Miami ee dalka USA, kaddib markii aan ka soo laabtay Koobkii Adduunka ee aan kala qeyb galay xulka Belgium”.
“Waxaa halkaas joogay ciyaartoy badan ee aan ka qeyb galin koobka adduunka ee u dabaal dagayay koobka”.
“Waxaan ku jiray xaalad ah, sida inaan doonayay inaan ku iraahdo lacnad haku dhacdo, xitaa maadan ciyaarin Koobkii Adduunka”.
Dad badani waxay rumeysan yihiin in hadaladan uu Romelu Lukaku kala jeedo weeraryahanka reer France ee Anthony Martial, kaasoo ku fashilmay inuu kala qeyb galo xulkiisa qaranka France koobkii adduunka ee 2018 ee lagu qabtay dalka Ruushka, oo ay ugu dambeyntii ku guuleysteen wiilasha tababare Didier Deschamps.
Waxaa xusid mudan in Romelu Lukaku ilaa iyo semi-finalka la gaaray xulkiisa qaranka ee Belgium, kahor inta aysan guuldaro kala kulmin dhigooda Faransiiska, xili Martial uusan xiligaas qeyb ka aheyn xulkii Didier Deschamps ee qaaday koobka adduunka 2018.